अन्जु पन्तकी छोरी अब नायिका बन्दै, आमा छोरीको माया भनेको यस्तो होस (भिडियो सहित) – live 60media
अन्जु पन्तकी छोरी अब नायिका बन्दै, आमा छोरीको माया भनेको यस्तो होस (भिडियो सहित)
गायिका अञ्जु पन्तले ‘धेरै माया नदेऊ मलाई, टाढा हुँदा गाह्रो हुन्छ’ स्वर तथा संगीत भरेको गीत हो यो । तर गीतको भावले उनी र उनकी छोरी परितोषिकाबीचको सम्बन्धको कथा भन्छ । अञ्जुलाई छोरी परितोषिका ठूली हुँदै जाँदा एक दिन आफूलाई छाडेर पराई घर जान्छिन् भन्ने सोच आइसकेको छ ।
तर, के छोरीलाई आमालाई छाडेर पराई घर जानुपर्छ भन्ने सोच आएको छ त ? परितोषिकाले भनिन्–‘यो त मलाई लागि नै हाल्छ । सधैं त म ममीसँग हुन सक्दिनँ । यसैले त मैले ममीलाई जीवनसाथी खोज्न बारम्बार आग्रह गरेको छु ।’
अहिलेसम्म अञ्जुको जिन्दगी रमाइलोसँग बितिरहेको छ । तर, जीवनसाथी नहुँदा उनलाई पीडा भएको छ कि भनेर उनकै साथी, आफन्त र छोरीले पनि सोच्ने गर्छन् । अञ्जु र परितोषिकाको सम्बन्ध ‘आमा छोरी’को भन्दा पनि ‘साथी’को जस्तो छ । उनीहरु एक अर्कासँग मनका पीडा, खुशी, सफलता, असफलता सबै साट्छन् ।
परितोषिका सानै हुँदा अञ्जु र मनोज राजको डिभोर्स भयो । के परितोषिकाले बाबुको अभाव महसुस गरिन् त ? उनी भनिन्–‘बच्चामा कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो नै । तर, मेरो ममीले मलाई आमा र बुबा दुबैको माया दिनुभएको छ । परितोषिकाका कारण आजसम्म अञ्जुले कुनै तनाव लिनुपरेको छैन । अञ्जु भन्छिन्–‘मलाई चौतर्फी रुपमा तनाव हुँदा पनि छोरीका कारण खुशी मिलेको छ । यसैले पनि मलाई बाँच्ने आधार मिलेको छ ।’
परितोषिका मोडलिङ गर्ने र नायिका बन्ने सोचका साथ अगाडि बढेकी छन् । उनलाई नायिका बनाउनका लागि निर्माता–निर्देशक अञ्जुको घरसम्म पुगेका छन् । अब भने अञ्जु छोरीलाई कला क्षेत्रमा ल्याउने तयारीमा लागेकी छिन् । हेर्नुस भिडियो
← हलेसी मन्दिरमा एक महिनामा छ लाख भेटी सङ्कलन
भेटियो पाथिभरा माताको साक्षात पाइला, पत्याउनै गाह्रो हुने अनौठो रहस्य! (भिडियोसहित),,हेर्दै ॐॐ लेखी शेयर गरौं । →